Semalt: Kurasikirwa neMafungiro eMweya MuGoogle Analytics
Kuendesa kweMweya ndeyechokwadi, uye mumwe angave akasangana navo asina kumbozviziva. Zvinogona kuonekwa semugwagwa wakanaka uye unobatsira, asi chokwadi ndechekuti hapana motokari zvachose. Zvakaipisisa ndezvokuti motokari inoparadzanisa nhau dzeGoogle Analytics. Icho hachina mhando yekodzero yezvese nzvimbo dzepamami sezvavanoramba vachichinja. Sezvavanoramba vachikura, vanochinja maitiro avo, masangano, uye teknolojia yakashandiswa - любое add topic. Ndiyo chikonzero nei pasina chikonzero chechokwadi chekutyisa.
Nhungamiro inotevera inopiwa naMichael Brown, Mutungamiriri weKutengi Achibudirira Semalt , anofanira kubvisa huwandu hwezvinotyisa izvi.
Kubvisa Spam Referrals kubva kuGoogle Analytics
Kune nzira dzakasiyana-siyana kuburikidza nemushandisi anogona kuita basa:
Kushandisa Google Tag Manager
filters yeGoogle Analytics
# 1 Dzose Zvinhu Zvose Kumusoro
Dhiyabhorosi iri mumamiriro ezvinhu inokosha. Kana mumwe ari kutarisana nechinhu chero chipi zvacho chine simba rekuchinja sarudzo yakadai sewareware, Trojans, kana mavairasi. Saka zvakakosha kuti udzoke shure pakutanga pane chimwe chinhu. Pane nzira dzakawanda dzekusimudzira Analytics kuti uone kuti muridzi wacho anochengetedza zvose zvakashata data.
# 2 Kushandisa Wrong Hostname Filter
Vhura Google Analytics, uye enda kuVateereri, uye osarudza Network. Paunenge uzarura, sarudza Hostname kuti uratidze mazita ose mazita akashandiswa kune vashandisi vanoda kutarisisa nzvimbo. Hazvibviri kukwanisa kuongorora Analytics script pane imwe nzvimbo yepamusoro pane yako. Kana ghost referrer iri kuoneka, chengeta ku Admin, iyo korona yakarurama inofanira kuisa sarudzo yekutsvaga yakarurama yemhando yaunoda kushandisa..Zvadaro, sarudza mafaira uye sarudza firiji itsva. Sarudza tsika yemhando yefaira uye sarudza zvinosanganisira. Zvadaro, faira regex iyo inofanidza zita rinotaridzirwa nezita kana pasina www.
# 3 Kufambisa Nzira Yekutengesa Zvakaipa
Chinhu chekutanga chekuita ndechokushambadzira motokari inowanzobva panzvimbo yewebsite. Zvisinei, kana spambot inoita nzira yayo kuenda kunzvimbo, kutanga tanga firiji itsva nekufamba kune firiji, tanga tsika itsva yechirongwa. Sarudza "kutumira" mu filter field, uye "regex refu" mumufananidzo wefaira. Chechipiri, Analytics inopa chiitiko umo vashandisi vanogona kubudisa tsvina uye bots. Sarudza "Admin", chengeta pa "kuona", uye pasi pe "maitiro ekuona", chengetedza mazita okuti "Botnet Filtering".
# 4 Kuisa Cookie Kuchenesa Spam Referrals
Zvigadziriswa zvakasimwa kusvika zvino hazvirevi kwenguva refu nekuda kwenhamba inowedzera ye spam bots zuva nezuva. Heino imwe chirevo chinofanira kushanda panzvimbo iyi:
Spam bots haina ma browsers.
Isai cookie pane mushanyi wevashanyi.
Verengai cookie muGoogle Tag Manager uye ita iyi mu analytics.
Google Analytics inongotarisa vashanyi vane cookie.
Muridzi wepaiti anogona kugadzira makiki pane mushanyi wevashanyi achishandisa nzira mbiri. Yokutanga ndeyekutema moto mumagoja weTag kana kuti kuwedzera maokie uchishandisa code snippet "mushure mokunge
tag" pasi pechifambiso. Google Analytics haigoni kuwana Tag Manager 'cookie ndicho chikonzero chekupedzisira ndiyo yakanakisisa.
Pamusoro pe "Admin" tab, sarudza "zvinyorwa zvetsika uye zviyero." Dzai chikwata che-cookie-dev. Iye zvino, verenga kukosha kwekiki kuburikidza nekuenda kune zvimwe zvinoshandiswa, nekudhinda pane zvitsva. Kana waita izvi, tanga kuenda kuGTM, uye pasi pemaitiro ekugadzirisa tsika, tumira mutsva wekutsvaga uye dhiyabhorosi yakasiyana-siyana yakasikwa. Nhanho yekupedzisira ndeyekuita kuti Google Analytics ione chete magwara ne cookie. Gadzira firiji itsva nemararamiro akavharidza tsanangudzo dzecookie.